आज असोज १३ गते (सेप्टेम्बर २९) मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
September 29, 2020 1564
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) भौतिक सम्पतिहरु जुट्नेछन् भने उपाहार प्राप्त हुने योग रहेको छ । नयाँ कामहरु गरेर आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । सरकारी सम्पति तथा पैत्रिक सम्पति हात लागि हुने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ ।
दाजुभाई वा अग्रजहरुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । बिद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाई लेखाईमा मन जानेछ । बौद्धिकता प्रयोग गरि समाजमा राम्रा काम गरेर देखाउन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताब आउँनेछ भने नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरि प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउँने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा भने जस्तो नाफा कमाउँन सकिनेछ ।
छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसियाली छाउनेछ । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढेर जानेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले जनताको गतिलो सम’र्थन प्राप्त गर्नेछन् । माया प्रेममा एक अ’र्काको साथ रहने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) स्वास्थ्यमा आउने समस्याका कारण दैनिक काम’हरु प्रभावित हुनेछन् । चिन्ता तथा छट्पटिले उर्जा तथा आत्मबिश्वासमा कमि ल्याउनेछ । नगर्नु पर्ने काममा नै हात हाल्दा व्यावसायिक रु’पमा घाटा लाग्ने’छ । धन सम्पति तथा पैत्रिक धन हराउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पति तथा खनिज पदार्थको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहो’ला नराम्रा घ’ट्ना घट्न सक्छ । माया प्रेममा धोका हुनेछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) आर्थिक पक्ष बलियो रह’ने हुनाले जिवनशैलीी बिला’शी रहनेछ । नया काम गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने भौतिक सम्प’ति तथा स्थाई सम्पति जो’ड्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा आ’फन्त तथा प्रियजन भेटिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । परिवार’सँगै बसेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्ने हुनाले मन खुसि रहनेछ । पढा’ई लेखाईमा राम्रो नतिजा ल्याउदै अगि बढ्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) कुनै पनि वि’वाद वा प्रतिष्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिने’छ । मुद्दा मामिला तथा यस्तै क्रियाक’लापमा सामेल नहुनु नै राम्रो रहेकोछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग मनमु’टाब बढ्ने योग रहेकोछ । सत्रुहरुले टाउ’को उठाउन खोज्नेछन् ध्यान दिनुहोला । व्यापारमा भनेजस्तो आम्दानि नहुने हुनाले दैनिकी प्रभा’वित हुनेछ । तपाईको कामबाट अरुले फाईदा लिन खोज्नेछन् । स्वास्थ्यमा सा’मान्य समस्या आई खर्च बढ्नेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) व्या’वसाय तथा काम गर्ने वातावरण बन्ने हुना’ले आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । आफन्त तथा सन्तानबाट तपाईको का’ममा बिशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ । बौद्धि’कताको प्रयोग गरि नाम तथा दाम कमा’उन सकिनेछ । नया बिचार दिमाग’मा आउने हुनाले प्रविधिको प्रयोग गरि व्यावहारमा रु’पान्तरण गर्न सकिनेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । पढाइकै शिलशि’लामा यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) माया प्रेममा अबि’श्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यास्त हुँदा पढाइ ले’खाइ कमजोर रहनेछ । कृषि तथा पशुपा’लन व्यावसायमा समय लगानि गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानि गर्न सक्नेछन् । समाजसेवामा नाम कमा’उन अलि बढिनै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा ईष्ट मित्रसँग टाडिएर लामो यात्रा गर्नुपर्दा मन’मा बेचैन बढ्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) सानो प्रयत्नले राम्रो का’म गरि फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिश्पर्धिहरु परास्त हुने’छन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा मिल्ने साथि’को सहयोगले कामहरु बन्नेछन्् । रोकिएर बसेका का’महरु बन्नुको साथै बिस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकि’नेछ । छिमेकिहरु माझ राम्रो कामगरि प्रशिद्धि कमाउन सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) कुटुम्ब तथा बोलि भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमा:ले कुटुम्बसँगको बि:ग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्न सकिनेछ भने बालिको माध्यय’मबाट राम्रा तथा परिणा’ममुखि काम गर्न सकिनेछ । व्याव:साय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानि बढ्ने तथा उठ्नु पर्ने रकम हात लागि हुनेछ । शुभ तथा मांगलिक कार्यमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोज’नका साथ रमाईलो बाताब’रणमा दिन कटाउन सकिनेछ । माया प्रे:ममा नजिक हुने समय रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) कलात्म’क तथा रच’नात्मक काम सुरु गरि भविश्यमा आयस्रोतका बाटाहरु सुरक्षित गर्न सकिनेछ । राजनिति कर्मी’हरुका लागि समय फलदायि रहेकोले पद प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । व्यापारमा समय ल’गानि गर्नेहरु’ले मनग्गे धन कमाउने तथा आर्थि’क उन्नति हुने ग्रहयोग रहेकोछ । बिद्यार्थीहरुले खोजमुलक क्षेत्रमा भनेजस्तो सफल’ता हात पार्नेछन् । प्रेम गर्ने जोडिह’रुका लागि समय उत्तम रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) खानपान तथा मौषम’को ध्यान नदिए स्वास्थ्य’मा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा अग्रजको स्वास्थ्यमा समस्या’ आई उपचार ख’र्च बढ्ने योग रहेकोछ । माया प्रेममा धो’का हुनेछ भने जीवन साथि सँग मनमुटाब बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा ध्या’न नजादा अरु भन्दा पछि परिनेछ । बिदेशमा उत्पादित सामानको व्यावसाय फस्टा’एर जानेछ मने स्वादेशी सा’मानको व्यापारमा मन्दि आउनेछ ।
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? जिल्लागत विवरणसहित
Nextफिल्मी शैलीमा अप’हरण गरी एक नेपाली युवाको यसरी गरियो ह’त्या…..
प्रेमिका भेट्न अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया गएका एक नेपालीले प्रेमिकाकै साथीलाई र’क्सी खुवाएर ब’लात्कार !
पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडाका सानोमा यस्ती थिइन् (हेर्नु’होस् तस्विरहरु)
आज पुष १७ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्